CIYAARAHA CAALAMKA | Ciyaaro Online | Page 20
Home - CIYAARAHA CAALAMKA (page 20)
Mourinho : “Man U waqti badan ayaan joogi doonaa”
Tababaraha Kooxda Man United Jose Mourinho ayaa waxaa uu ka hadlay mustaqbalkiisa Kooxda Man United,waxaana uu sheegay in waqti badan uu joogayo kooxda. Waxaa uu sheegay in uu Manchester United ay noqoneyso kooxda uu waqtiga ugu badan ku bixin doono,waliba waqti uusan joogin dhamaan kooxaha kale ee uu horay u soo maamulay. Waxaa uu sheegay in ugu yaraan 10 Sano ...
Juventus oo garaacday Inter Milan
Kooxda kubadda Cagta Juventus ayaa guul muhiin u ahayd ka gaartay kooxda Inter Milan oo ay ku booqatay Magaalada Milaano ee dalka Talyaaniga. Kulankan waxaa uu xiise u lahaa labada kooxood waxaana Juventus ay muhiim u ahayd guushan maaddaama ay kaliya hal dhibic ka horreysay Napoli ka hor kulanka. Hayeeshee hadda waxaa ay 4 dhibcood ka sarreysaa Napoli oo Fiorentine ...
Paulo Dybala oo lagula talinayo inuu aado middood Barcelona ama Real Madrid
Laacibka dalka Argentine ayaa dhaliyay kaliya 1 gool Champions League wax bandhig ah oo fiicanna kama uusan sameyn Sanadkan. Dybala waxaa lagu arkay diiwaanka kooxaha LaLiga iyadoo Palermo madaxweynaheeda Maurizio Zamparini uu ku waaniyay laacibkan in uu ka tago horyaalka Serie A si uu horumar u sameeyo. “Markii ugu horreysay ee aan dareemo in horumarkiisu hoos u socdo, qoraalkii aan ...
SAFAFKA RASMIGA AH: Liverpool vs Stoke City, Salah iyo Firmino oo kusoo Billowday safka kooxda
Liverpool ayaa la ciyaari doonta kooxda Stoke City kulan goordhow ka dhacaya garoonka Anfield ee Premier League. Iyadoo uu soo socodo kulanka xiisaha leh ee Liverpool ay Champions League semi-final la ciyaari doonto Roma. Jurgen Klopp kooxdiisa ayaa ku badisay 5-2 lugta hore ee ay la qaadatay kooxda Talyaaniga ah. Stoke waxay u baahantahay guul si ay rajadeeda badbaadada heerka ...
Milan oo yeelaneysa milkiile cusub
Kooxda kubadda Cagta ee AC Milan ayaa ugu dambeyn bisha October ee soo soo socota ay yeelaneysi Milkiile cusub kaddib markii Ninka hadda iska leg uu bixin waayay kharshkii uu geliyay Kooxda AC Milan. Yonghong Li , oo ah Milkiilaha hadda ee AC Milan ayaa bixin la’ lacag dhan 300 Milyan iyo lacagaha dulsaarka ah ee kooxda lagu yeeshay,waxaana haddii ...
Waa kuma Shahid Khan,Ninka iibsanaya Garoonka Wembley ?
Shaahid Khaan waxaa Ganacsade u dhashay Dalalka Pakistan iyo Mareykanka,waa milkiilaha Kooxda Fulham ee hadda u soo dallacday Premier League waxaa uu sidoo kale leeyahay Kooxda Jacksonville Jaguars ee NFL-ka dalka Mareykanka. Waxaa uu Mareykanka tagay isaga oo 16 jjir ah lacag oo dhanna ka wata $500 Doollar,halkaas ayuu ka galay Jaamacadda University of Illnois. Maalqabeenkan waxaa uu hadda 800 Milyan kala ...
Juventus oo kordhisay lacagta ay ku dooneyso Martial
Kooxda kubadda Cagta ee Juventus ayaa la sheegayaa in ay sare u qaadday lacagaha ay ku dooneyso xiddigga weerarka uga ciyaara Manchester United ee Anthony Martial. Marwada duqda ah ayaa la sheegayaa in ay hadda diyaar la tahay lacag dhan €50Milyan oo Euro sida ay qorayaan Warbaahinta Dalka Talyaaniga ee ciyaaraha ka faallooda. Wargeyska Calciomercato.com,ayaa sheegaya in wadahadallada labada kooxood ay sameynayaan horumar ...
Xavi oo kaar cas Garoonka looga saaray
Xiddiggii hore ee Kooxda Barcelona Xavi Hernandez ayaa shalay garoonka laga saaray kaddib markii uu ka dacwooday gool kulaad laga dhigay kooxdiisa. Kooxda uu u ciyaaro ee Al Sadd ayaa waxaa ay ciyaar la lahayd kooxda lagu magacaabo Al-Duhail,,waxaana ay ciyaarta mareysay 1-1 bar barro ah. Hayeeshee daqiiqaddii 84aad ayaa laga dhigay gool kulaaad markii ay qalad galeen,waxaana isaga oo go’aankaas diiddan ...
Gerrard,oo tababare noqonaya,kooxda uu qabanayo
Halyeyga Qadka dhexe ee Kooxda Liverpool Steven Gerrard,ayaa la filayaa in uu dhawaan tababare ka noqdo mid ka mid ah kooxaha horyaalka Scotland ee Boqortooyada Ingiriiska iyada oo ay tababarayaashiisii hore qaarkood taageere u muujiyeen. Steven Gerrard,waxaa lagu wadaa in uu tababare ka noqdo kooxda Rangers ee Horyaalka Dalka Scotland,waxaana tababarayaasha ku taageeray ka mid ah Tababaraha Kooxda Newcastle Rafa Benitez iyo ...
Booliska Roma: “taageerayaasha Liverpool waxaa ku jira 1,000 aargoosi doon ah”
Booliska Magaalada Roma ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in ay isu diyaarinayeen kulanka Kooxaha Liverpool iyo Roma ee dhexmaraya Arbacada soo socota. Taliyaha Booliska Magaalada Roma ayaa sheegay in heerka digniinta la gaarsiiyay calaamadda casaanka ah islamarkaana Booliska ay diyaar u yihiin ka hortagidda rabshadaha dhici kara. Waxaa uu sheegay in 5,000 oo taageerayaasha Liverpool ah ay daawanayaan ciyaartaas,kuwaas oo ...
Xaggee Liverpool ku tababaran doontaa lugta 2aad ee Roma?
Kooxda Kubadda Cagta Liverpool ayaa xaqiijisay in ay ku tababaraneyso xerada Kooxda Kubadda Cagta Lazio ee ka dhisan Magaalada Roma ka hor kulanka labada kooxood ku dhexmaraya Magaaladaasi. Liverpool waxaa ay walaac ka muujisay amniga ciyaartooydeeda,waxaana ay iska diidday in ay la degto xerada Roma halkaas oo ay uga baqeyso in ay waxyeello u geystaan taageerayaasha Naadiga Roma ee dalka ...
Napoli oo koox ka iibsaneysa Portugal
Madaxweynaha Kooxda Kubadda Cagta Napoli ee dalka Talyaaniga Aurelio De Laurentiis,ayaa waxaa uu koox kubadda Cagta ah ka iibsanayaa Dalka Portugal. Aurelio De Laurentiis,ayaa sheegay in koox uu ka quudiyo kooxda Napoli uu ka iibsanayo dalka Portugal si ay u soo saarto ciyaartooy caawin karta kooxda weyn ee Napoli. Waxaa heshiiska Kooxda lagu iibinayo waxaa ku lug leh wakiilka caanka ah ...